သောကြာ သား သမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ တစ်နှစ် စာဟောစာတမ်း နှင့် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်များ – XB Media Myanmar
သောကြာ သား သမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ တစ်နှစ် စာဟောစာတမ်း နှင့် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်များ
သောကြာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆွေအဟောင်းများတွေ့တတ်ပြိး လုပ်ငန်းသစ်များ လုပ်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် မမျော်လင့်ထားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရရှိခံစားရမည်။ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများလည်း ကျော်ဇော်မည်။ မိမိအလိုရှိရာကို ကြိုးဆွဲ၍ ဖန်းတီးခြင်း ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ဖြစ်ပြိး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ကျစွာ ရင်းနှီး မ,တည်မှု ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ ပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခိုင်မာတိကျတဲ့လုပ်ငန်း၊ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပေ့ပြိး ကြီုးစားလုပ်ကိုင်ပါ အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မည်။
(၁၅- ၁-၂၀၁၉)မှစ၍(၁၅- ၆-၂၁၉)အထိ စီးပွားရေးများ တိုးတတ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် ဂတိစကားအလွယ်တကူးမယုံသင့်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ကောင်းပြိး သာမန်လူတန်းစာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းသမား အကြပ်အတည့်ကနေ့ အဆင်ပြေလာပါမယ့်။
လုပ်ငန်းရှင်၊ ဘောစီ မိမိလုပ်ငန်းဆရာများ အထက်တန်း အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိအားအလေ့ထား ချီမြှင့် မ,စခြင်းကိုခံရတတ်သည်။
ဝန်းထမ်းလောကသမားများ မင်းအစိုးရဝန်းထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိကဝန်းထမ်း လုပ်ကိုင်ပါက မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးစာပေး၍ လုပ်ကိုင်ရန် အကြံပြုပါတဲ့ခင်ဗျာ။ မိမိအကျိုး သူတစ်အပါးအကျိုး နှစ်ဦးအကျိုး ဖြစ်ထွန်းမည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး ချီမြှင့်မြောက်စားမှုများရှိမည်။ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းမမျော်လင့်ဘဲ ဝင်လာတတ်သည်။
2019ခု *2လ,6လ,8လ*များတွင် မည့်သည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင်မဆို သတိနှင့် အထူးဆောင်ရွက်ရမည်။
ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းဝင်လာမည်။ လုပ်ငန်းတွင် ပြိုင်ဘက်များ၏ အနှောက်အယှက်ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်တတ်သည်။
သိုသော် အတိုက်အခိုက်အမျိုးမျိုးကြားမှ အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပြိး
ကျော်လွှားနိုင်မည်။ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရ
မည်။ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ငွေးကြေးကိစ္စရပ်များချေးဌားခြင်း
သတိပြုဆောင်သင့်သည်။ အမွေအနှစ်ကိစ္စအတွက် ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့် အငြင်းပွားပြိး တရာရေးရာဥပဒေနှင့် အမှုအခင်းရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းမောင်းနှင်းခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းများသတိထားရမည်။
အထူး သောကြာသားသမီးများသည် ဤနှစ်တွင် *1*ဂဏန်း,
*6*ဂဏန်း,–*7*ဂဏန်းရက်မွေးဖွားသူများ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊အချစ်းရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး ကံဇာတာစံပွင့် ကံကောင်းမှုများဝင်လာတတ်သည်။
စီးပွားရေးဂဏ္ဍ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ခြင်း၊ ဖုန်းအပိုပစ္စည်းနှင့် စက်သုံးဆီးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်စက်အပို့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူးရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းခွင့်ခြင်း၊ ဖျော်ရည်ယမကရောင်းဝယ်ခြင်းများ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးမြတ်ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်​တွင် တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေးသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။
2019-ယခုနှစ်တွင် အလုပ်မရှိသောသူများနှင့် အလုပ်အကိုင်
အင်တာဗျူ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၊ ဘာသာရပ်ခြားပြည်ပစာမေးပွဲဖြေဆိုထားသူများ၊ ပြည်တွင်ပြည်အလုပ်အကိုင် နိုင်ငံရပ်ခြား
အခွင့်အလမ်းများ သတင်းကောင်းများ သယ်ဆောင်လာတတ်သည်။ *တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ့*နေနံနိုင်ငံ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ အဆင်
ပြေခြင်း၊ အလုပ်လျှောက်စာရခြင်း နိုင်ငံကူးပြောင်း အောင်မြင်မှုများ
အချစ်းရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအချစ်ရေး အထူး စံပွင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင် ပျိုရွယ်သူများ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ရေးမျိုးများနှင့်
ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းတူ အသွားအလာတူ နေရာမှ ချစ်သူရည်းစား တွေ့ရတတ်သည်။
လူပျို၊ အပျိုများ အချစ်ရေးထက် အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုမိုဦးစာပေးသင့်သည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန် သင့်တော်သော နှစ်လည်းဖြစ်သည်။
အချစ်ရေးနှင့် နှစ်ယုံကြည်စွာ လက်တွဲဖလှယ်ခြင်း ရှောင်ကြည့်ပေးပါ။
အသက် *၁၆* နှစ် မှ အသက် *၁၈*နှစ်ကြား၊ အသက် *၂၂* နှစ် မှ အသက် *၂၆*နှစ်ကြား ရောက်နေသူများ အချစ်ရေးပြဿနာများဖြစ်တတ်သည်။ အချစ်ရေးကိစ္စများ၌ မေတ္တာမပျက်ရုံသာပြောဆိုဆက်
ဆံနေထိုင်သင့်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စကားငြင်းဆိုမှုများ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။
အိမ်ထောင်ရှင်းများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုများဖြစ် ဘဝရပ်တည်မှုများထူထောင်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို
အကြောင်းပြပြောဆို၍ ပေးအပ်လာသော အပို့လက်ဆောင်များ မယူသင့် လက်မခံသင့်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုံးဝမပေးသင့်ပါ။ လိုအပ်
သည့်ထက် ပို၍ ရင်နှီးခင်မင်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
အိမ်ထောင်ရှင် သောကြာသားသမီးများအနေ့ဖြင့်.သားရတနာဖြစ်ထွန်းပြိး မိဘဆွေမျိုးများဘက်မှာ အမွေအနှစ်များ ရရှိတတ်သည်။ မိမိသားသမီးရတနာများထဲ တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ့ ကြာသပတေးသားသမီးများ ဤနှစ် ပြည်ပလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ပြည်ပပညာသင်ကြားသူများ၊ ပညာရေး စာမေးပွဲ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခြင်း သတင်းကောင်း
သယ်ဆောင်လာခြင်း မိဘဂုဏ်ထွက်ကြီး နာမည်ကျော်ဇောတတ်
သည်။ အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦးများ ပြုပြင်ရတတ်သည်။
ပညာရေးဂဏ္ဍ သစ်တောဦးစီးရေးရာ၊ အိမ်ခွန်/အိမ်ယာစီမံကန်းဦးစီးရေရာ၊ မြို့/ ရပ်ရေရွာရေးအုပ်ချူပ်သူများ၊ ရာထူး၊ ဌာနေ၊ နေရာပြောင်းရွေ့ခြင်းများရှိမည်။ ပြည်ပသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူခြင်း မင်းစိုးရဝန်းများအကြီးအကဲများစေလွှတ်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ သို့သော် အပေါင်းအသင်းများနှင့်ပျော်ပါးလိုက်းစားမှုများ ရှောင်ရမည်။
ပညာရေးတွင် ရှေ့ပိုင်းကြိုးစားမှုအားကောင်း၍ထူးချွန်ပြိး *ကံ*, *ဥာဏ်*, *ဝီရိယ*စိုက်ထုတ်ရမည်။ စက်မှု လက်မှု ပညာရပ်များ သင်ယူခြင်းကောင်း၏။
လုပ်ငန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် အခွင့်အလမ်းကောင်းမည်။ပညာရေးတွင် မိမိကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ထူးထူးခြားခြား တိုးတတ်အောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင် *ကံ*,*ဥာဏ်*,* ဝိရီယ*စိုက်ထုပ်ပြိး မိမိရည်မှန်းထားသော ပညာကိုသင်ယူရမည်။ သိုသော် ပညာစရိတ်အတွက် အခက်ခဲကြုံလာတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးဂဏ္ဍ ကျန်းမာရေးတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာများမကြာခဏ ခံစားရခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ အားရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ အပူနာပေါက်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အထူး လူပျို၊အပျိုးရွယ် အသက် ၂၂နှစ်မှာ ၃၆နှစ် နှင့် အရွယ်ရွယ်ကြီးများ အသက် ၅၆ မှာ ၆၅အတွင်းရှိ ကျန်းမားရေးဂရုစိုက်ပါ။ ငွေကုန်ကြေးကျများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်အားကစား တခုခုအမြဲလုပ်ပြိး လူအများဖြင့်ပြုလုပ်ရသော အားကစားတစ်မျိုးကို လိုက်စားသင့်သည်။ ကျန်းမားရေးသန်စွမ်း စိတ်ရွင်လန်းလိမ့်မည်။
သောကြာသားသမီးများ ထီးထိုရန် …အနောက်မြောက်အရပ်မှာ *၇၇*,ပူ – *၀၀*ပူ ပါသော (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)အက္ခရာ စပ်တူထီးထိုးခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) သူတပါးအား ထီးထိုးခိုင်းပြိး ထီးလက်မှတ်ကို
ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ပဌာန်းပစ္စယုဒေသပါဌိတော်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* လိမ္မော်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနီရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်
သောကြာသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်… အနောက်မြောက်
အရပ်မှာ ရေးအိုးစဉ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တန်ဆောင်း ပြုလုပ်လှူဒါန်း
ခြင်း နှင့် လှေကား ပြုပြင်ခြင်းများ ကုသိုလ်ပြုပါ။
မြောက်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် အုန်းပင် စိုက်ပါ။
သောကြာသားသမီးများ စိန်ရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။
(တ၊ ထ၊ စ၊ လ)(၀- ၄- ၇- ၉)
ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် သလဲညွန့်(၇)၊ ဒန်းညွန့်၊ သစ္စာပန်း၊
နှင်းဆီးပန်း(၅)ပွင့် ဘုရားတွင် လှူပေးပါ။
နွားနို့၊ ထိုးမုန့်၊ နဂါးမောက်သီးများ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပေးပါ။
ဘုရားတွင်(ပဌာန်းပစ္စယုဒေသပါဌိတော်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်
ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ. 09456471357(Viber)
သောကွာသားသမီးမြားသညျ ယခုနှဈတှငျ မိတျဆှအေဟောငျးမြားတှတေ့တျပွိး လုပျငနျးသဈမြား လုပျရမညျ။ ယခုနှဈတှငျ မမြျောလငျ့ထားသော စညျးစိမျဥစ်စာ ရရှိခံစားရမညျ။ မိမိတို့၏ ဂုဏျသတငျးမြားလညျး ကြျောဇျောမညျ။ မိမိအလိုရှိရာကို ကွိုးဆှဲ၍ ဖနျးတီးခွငျး ရယူပိုငျဆိုငျနိုငျသညျ့ ဖွဈပွိး စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ယုံကွညျစိတျကစြှာ ရငျးနှီး မ,တညျမှု ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ ပွုလုပျပါ။ ဒါပမေယျ့ ခိုငျမာတိကတြဲ့လုပျငနျး၊ ဥပဒနှေငျ့ညီညှတျစှာ လုပျကိုငျဖို့တော့ လိုအပျပပွေိ့း ကွီုးစားလုပျကိုငျပါ အောငျမွငျမှုရပါလိမျ့မညျ။
(၁၅- ၁-၂၀၁၉)မှစ၍(၁၅- ၆-၂၁၉)အထိ စီးပှားရေးမြား တိုးတတျအောငျဆောငျရှကျရမညျ။ ယခုနှဈတှငျ ဂတိစကားအလှယျတကူးမယုံသငျ့ပါ။ အဖှဲ့အစညျးလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျခွငျးထကျ မိမိကိုယျပိုငျလုပျငနျးမြား ကောငျးပွိး သာမနျလူတနျးစာ အရောငျးအဝယျလုပျငနျးသမား အကွပျအတညျ့ကနေ့ အဆငျပွလောပါမယျ့။
လုပျငနျးရှငျ၊ ဘောစီ မိမိလုပျငနျးဆရာမြား အထကျတနျး အကွီးအကဲပုဂ်ဂိုလျမြား မိမိအားအလထေ့ား ခြီမွှငျ့ မ,စခွငျးကိုခံရတတျသညျ။
ဝနျးထမျးလောကသမားမြား မငျးအစိုးရဝနျးထမျး၊ ပုဂ်ဂလိကဝနျးထမျး လုပျကိုငျပါက မိမိဆုံးဖွတျခကျြကို ဦးစာပေး၍ လုပျကိုငျရနျ အကွံပွုပါတဲ့ခငျဗြာ။ မိမိအကြိုး သူတဈအပါးအကြိုး နှဈဦးအကြိုး ဖွဈထှနျးမညျ။ အလုပျနှငျ့ပတျသကျ၍ ဘှဲ့ထူး၊ ဂုဏျထူး ခြီမွှငျ့မွောကျစားမှုမြားရှိမညျ။ ယာဉျနှငျ့ စကျပစ်စညျးမမြျောလငျ့ဘဲ ဝငျလာတတျသညျ။
2019ခု *2လ,6လ,8လ*မြားတှငျ မညျ့သညျကိစ်စဆောငျရှကျရာတှငျမဆို သတိနှငျ့ အထူးဆောငျရှကျရမညျ။
ယာဉျနှငျ့ စကျပစ်စညျးဝငျလာမညျ။ လုပျငနျးတှငျ ပွိုငျဘကျမြား၏ အနှောကျအယှကျကွောငျ့ စီးပှားရေးထိခိုကျတတျသညျ။
သိုသျော အတိုကျအခိုကျအမြိုးမြိုးကွားမှ အောငျမွငျမှုကိုရနိုငျပွိး
ကြျောလှားနိုငျမညျ။ လူမှုရေးနှငျ့ ဘာသာရေးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျရ
မညျ။ အစုရှယျယာလုပျငနျးမြား၊ ငှေးကွေးကိစ်စရပျမြားခြေးဌားခွငျး
သတိပွုဆောငျသငျ့သညျ။ အမှအေနှဈကိစ်စအတှကျ ဆှမြေိုးသားခငျြးနှငျ့ အငွငျးပှားပွိး တရာရေးရာဥပဒနှေငျ့ အမှုအခငျးရငျဆိုငျရတတျသညျ။ စကျပစ်စညျးမောငျးနှငျးခွငျး၊ ကိုငျတှယျခွငျးမြားသတိထားရမညျ။
အထူး သောကွာသားသမီးမြားသညျ ဤနှဈတှငျ *1*ဂဏနျး,
*6*ဂဏနျး,–*7*ဂဏနျးရကျမှေးဖှားသူမြား စီးပှားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကနျြးမာရေး၊အခဈြးရေးနှငျ့အိမျထောငျရေး ကံဇာတာစံပှငျ့ ကံကောငျးမှုမြားဝငျလာတတျသညျ။
စီးပှားရေးဂဏ်ဍ အိမျခွံမွအေကြိုးဆောငျခွငျးနှငျ့ အိမျခွံမွရေောငျးဝယျခွငျး၊ ဥယြာဉျခွံလုပျခွငျး၊ ဖုနျးအပိုပစ်စညျးနှငျ့ စကျသုံးဆီးရောငျးဝယျခွငျး၊ ရသေနျ့စကျအပို့ပစ်စညျးရောငျးဝယျခွငျး၊ ဆေးဝါးရောငျးဝယျခွငျး၊ စိုကျပြိုးရေး ၊ မှေးမွူးရေးလုပျငနျး၊ အပနျးဖွစေခနျးခှငျ့ခွငျး၊ ဖြျောရညျယမကရောငျးဝယျခွငျးမြား အစုရှယျယာလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျရာတှငျ အကြိုးမွတျရရှိမညျ့နှဈဖွဈသညျ။ ယခုနှဈတှငျ တနင်ျဂနှေ၊ ဗုဒ်ဓဟူး၊ ကွာသပတေးသားသမီးမြားနှငျ့ မညျသညျ့ကိစ်စမဆိုဆောငျရှကျရာတှငျ အောငျမွငျမှုရရှိမညျ။
2019-ယခုနှဈတှငျ အလုပျမရှိသောသူမြားနှငျ့ အလုပျအကိုငျ
အငျတာဗြူ အလုပျလြှောကျထားသူမြား၊ ဘာသာရပျခွားပွညျပစာမေးပှဲဖွဆေိုထားသူမြား၊ ပွညျတှငျပွညျအလုပျအကိုငျ နိုငျငံရပျခွား
အခှငျ့အလမျးမြား သတငျးကောငျးမြား သယျဆောငျလာတတျသညျ။ *တနင်ျဂနှေ၊ဗုဒ်ဓဟူး၊စနေ့*နနေံနိုငျငံ ပွညျပအလုပျအကိုငျမြား အဆငျ
ပွခွေငျး၊ အလုပျလြှောကျစာရခွငျး နိုငျငံကူးပွောငျး အောငျမွငျမှုမြား
အခဈြးရေးနှငျ့အိမျထောငျရေးအခဈြရေး အထူး စံပှငျ့သောနှဈဖွဈသညျ။ ထိုပွငျ ပြိုရှယျသူမြား တဈဖကျသတျအခဈြရေးမြိုးမြားနှငျ့
ကွုံတှရေ့တတျသညျ။ လုပျငနျးတူ အသှားအလာတူ နရောမှ ခဈြသူရညျးစား တှရေ့တတျသညျ။
လူပြို၊ အပြိုမြား အခဈြရေးထကျ အိမျထောငျရေးကို ပိုမိုဦးစာပေးသငျ့သညျ။ အိမျထောငျပွုရနျ သငျ့တျောသော နှဈလညျးဖွဈသညျ။
အခဈြရေးနှငျ့ နှဈယုံကွညျစှာ လကျတှဲဖလှယျခွငျး ရှောငျကွညျ့ပေးပါ။
အသကျ *၁၆* နှဈ မှ အသကျ *၁၈*နှဈကွား၊ အသကျ *၂၂* နှဈ မှ အသကျ *၂၆*နှဈကွား ရောကျနသေူမြား အခဈြရေးပွဿနာမြားဖွဈတတျသညျ။ အခဈြရေးကိစ်စမြား၌ မတ်ေတာမပကျြရုံသာပွောဆိုဆကျ
ဆံနထေိုငျသငျ့သညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ စကားငွငျးဆိုမှုမြား ပျေါပေါကျလာလိမျ့မညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား အပြျောအပါးလိုကျစားခွငျးကွောငျ့ အိမျထောငျရေး ထိခိုကျမညျ။
အိမျထောငျရှငျးမြား တဈဦးနှငျ့တဈဦး ယုံကွညျမှုမြားဖွဈ ဘဝရပျတညျမှုမြားထူထောငျရမညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား ခငျမငျရငျးနှီးမှုကို
အကွောငျးပွပွောဆို၍ ပေးအပျလာသော အပို့လကျဆောငျမြား မယူသငျ့ လကျမခံသငျ့ပါ။ မိမိကိုယျတိုငျလညျး လုံးဝမပေးသငျ့ပါ။ လိုအပျ
သညျ့ထကျ ပို၍ ရငျနှီးခငျမငျခွငျးကို ရှောငျပါ။
အိမျထောငျရှငျ သောကွာသားသမီးမြားအနဖွေ့ငျ့.သားရတနာဖွဈထှနျးပွိး မိဘဆှမြေိုးမြားဘကျမှာ အမှအေနှဈမြား ရရှိတတျသညျ။ မိမိသားသမီးရတနာမြားထဲ တနင်ျဂနှေ၊ ဗုဒ်ဓဟူး၊ စနေ့ ကွာသပတေးသားသမီးမြား ဤနှဈ ပွညျပလုပျကိုငျသူမြားနှငျ့ ပွညျပပညာသငျကွားသူမြား၊ ပညာရေး စာမေးပှဲ ထူးခြှနျစှာအောငျမွငျခွငျး သတငျးကောငျး
သယျဆောငျလာခွငျး မိဘဂုဏျထှကျကွီး နာမညျကြျောဇောတတျ
သညျ။ အိမျခွံမွအေဆောကျအဦးမြား ပွုပွငျရတတျသညျ။
ပညာရေးဂဏ်ဍ သဈတောဦးစီးရေးရာ၊ အိမျခှနျ/အိမျယာစီမံကနျးဦးစီးရရော၊ မွို့/ ရပျရရှောရေးအုပျခြူပျသူမြား၊ ရာထူး၊ ဌာနေ၊ နရောပွောငျးရှခွေ့ငျးမြားရှိမညျ။ ပွညျပသို့သှားရောကျပညာသငျယူခွငျး မငျးစိုးရဝနျးမြားအကွီးအကဲမြားစလှေတျခွငျး ခံရတတျသညျ။ သို့သျော အပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့ပြျောပါးလိုကျးစားမှုမြား ရှောငျရမညျ။
ပညာရေးတှငျ ရှပေို့ငျးကွိုးစားမှုအားကောငျး၍ထူးခြှနျပွိး *ကံ*, *ဉာဏျ*, *ဝီရိယ*စိုကျထုတျရမညျ။ စကျမှု လကျမှု ပညာရပျမြား သငျယူခွငျးကောငျး၏။
လုပျငနျးစာမေးပှဲ ဖွဆေိုခှငျ့ အခှငျ့အလမျးကောငျးမညျ။ပညာရေးတှငျ မိမိကွိုးပမျးမှုကွောငျ့ ထူးထူးခွားခွား တိုးတတျအောငျမွငျလာလိမျ့မညျ။ ပညာရေးတှငျ *ကံ*,*ဉာဏျ*,* ဝိရီယ*စိုကျထုပျပွိး မိမိရညျမှနျးထားသော ပညာကိုသငျယူရမညျ။ သိုသျော ပညာစရိတျအတှကျ အခကျခဲကွုံလာတတျသညျ။
ကနျြးမာရေးဂဏ်ဍ ကနျြးမာရေးတှငျ ခေါငျးကိုကျခွငျးဝဒေနာမြားမကွာခဏ ခံစားရခွငျး၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ အရပွေားရောဂါ၊ အားရုံကွောအားနညျးခွငျး၊ အပူနာပေါကျခွငျးမြားဖွဈတတျသညျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အထူး လူပြို၊အပြိုးရှယျ အသကျ ၂၂နှဈမှာ ၃၆နှဈ နှငျ့ အရှယျရှယျကွီးမြား အသကျ ၅၆ မှာ ၆၅အတှငျးရှိ ကနျြးမားရေးဂရုစိုကျပါ။ ငှကေုနျကွေးကမြား ကွုံတှရေ့တတျသညျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပုံမှနျအားကစား တခုခုအမွဲလုပျပွိး လူအမြားဖွငျ့ပွုလုပျရသော အားကစားတဈမြိုးကို လိုကျစားသငျ့သညျ။ ကနျြးမားရေးသနျစှမျး စိတျရှငျလနျးလိမျ့မညျ။
သောကွာသားသမီးမြား ထီးထိုရနျ …အနောကျမွောကျအရပျမှာ *၇၇*,ပူ – *၀၀*ပူ ပါသော (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)အက်ခရာ စပျတူထီးထိုးခွငျးနှငျ့ (သို့မဟုတျ) သူတပါးအား ထီးထိုးခိုငျးပွိး ထီးလကျမှတျကို
ဆောငျရှကျစရာကိစ်စမြား ယခုနှဈတှငျ ခရီးသှားခွငျးနှငျ့လုပျငနျးကိစ်စအဆငျပွရေနျအတှကျ ဘုရားတှငျ(ပဌာနျးပစ်စယုဒသေပါဌိတျော) ရှတျဆိုပွိး ပုတီး(၅)ပတျစိတျပွီး ခရီးသှားခွငျး၊* လိမ်မျောရောငျ၊ အဖွူရောငျ၊ အနီရောငျ * အဝတျအထညျမြာဝတျဆငျခွငျးနှငျ့ ထိုအရောငျ
သောကွာသားသမီးမြား ကံကောငျးစလေိုသျော… အနောကျမွောကျ
အရပျမှာ ရေးအိုးစဉျတညျဆောကျခွငျး၊ တနျဆောငျး ပွုလုပျလှူဒါနျး
ခွငျး နှငျ့ လှကေား ပွုပွငျခွငျးမြား ကုသိုလျပွုပါ။
မွောကျအရပျ လမျးဘေးဝဲယာတှငျ အုနျးပငျ စိုကျပါ။
သောကွာသားသမီးမြား စိနျရတနာ ဝတျဆငျပါ။
(တ၊ ထ၊ စ၊ လ)(ဝ- ၄- ၇- ၉)
ယတွာ မိမိမှေးနတှေ့ငျ သလဲညှနျ့(၇)၊ ဒနျးညှနျ့၊ သစ်စာပနျး၊
နှငျးဆီးပနျး(၅)ပှငျ့ ဘုရားတှငျ လှူပေးပါ။
နှားနို့၊ ထိုးမုနျ့၊ နဂါးမောကျသီးမြား ဆှမျးတျောကပျလှူပေးပါ။
ဘုရားတှငျ(ပဌာနျးပစ်စယုဒသေပါဌိတျော) ရှတျဆိုပွိး ပုတီး(၅)ပတျ
ဗဒေငျနှငျ့လက်ခဏာ ဆရာမငျးသူရ. 09456471357(Viber)
စနေေ န့ဖွား တို့ ပင် ကိုယ် စရိုက်၊လက္ခဏာ များ